Ikalamavony : dahalo telo maty voatifitry ny zandary | NewsMada
Ikalamavony : dahalo telo maty voatifitry ny zandary
Dahalo miisa telo no lavon’ny zandary tany Ikalamavony ka tratra tany amin’izy ireo ny basy FC iray calibre 16, ny alakamisy teo. Votsotra ny ankizy roa nataon’izy ireo takalon’aina ary tafaverina manontolo ny omby 60 nangalarin’izy ireo.
Araka ny fanazavana avy amin’ny zandary, miisa 20 ireo olon-dratsy ireo nanafika ny tanànan’i Magnova, fokontany Vatsiana, kaominina Ikalamavony, io alakamisy io tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany maraina. Noraofin’izy ireo ny omby miisa 60 teny ankijana an’olona roa samy hafa ary nentin’izy ireo koa, nataony takalon’aina, ny zazalahikely miisa roa mpianatry ny EPP, 12 sy 9 taona.
Nanara-dia avy hatrany raha vao nandre ny zava-nisy ny zandary miisa dimy avy ao amin’ny borigady Ikalamavony, nampian’ny tafika malagasy miisa valo avy ao amin’ny 219ème compagnie sy ireo mponina. Nifankatratra ny mpanenjika sy ny mpangalatra tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro ka raikitra ny fifandonana. Nisy ny lavo tamin’ireo dahalo raha naratra kosa ny olona roa sivily tamin’ireo mpanara-dia. Tafaporitsaka teny am-pela-tanan’ireo dahalo kosa izy roa lahikely nentina an-keriny rehefa nandositra ireo dahalo izay tsy nahatosika ny herin’ireo mpitandro filaminana. “Ny fiaraha-miasa amin’ny samy mpitandro filaminana sy amin’ny mponina koa anefa, irariana hatrany ny hitohizany fa tsy misy afa-tsy ny fahaombiazana no vokatr’izany, toy izao vokatra izao”, hoy ny zandary.